फेला परिन अनौठो घरबेटी ! पी’डितका लागि भगवान बनिन् (पुरा भिडियो हेर्नुहोला) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/फेला परिन अनौठो घरबेटी ! पी’डितका लागि भगवान बनिन् (पुरा भिडियो हेर्नुहोला)
ललितपुर जिल्लास्थित टिकाथलीमा भने श्रीमती छाडेर श्रीमान् अर्कैसँग भागेका छन् । यहि माघबाट आफ्नी श्रीमती छाडेर अर्कै महिलासँग भागेको श्रीमती अनिता आले मगरको आरोप छ । यस बारेमा अनिताको घरधनि श्रेष्ठले अनिता र उनको श्रीमानको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु खोलेकी छिन् ।
यहि माघबाट बेपत्ता भएका श्रीमानको ठेगाना थाहा नभएको तर श्रीमानसँग केटीको अनुसार सिन्धुलीमा भएको खबर पाएको उनले बताएकी छिन् । काम गर्दै आएका श्रीमानले श्रीमतीलाई रङ्ग किन्ने भनेर ५ लाख ऋणमा डुबाएर केटीसँग बेपत्ता भएका छन् । कहाँ गए के गर्दै छन् अनितालाई कुनै खबर छैन ।
कक्षा ६ मा पढ्दै गरेका १२ बर्सिय छोरा र श्रीमती छोडेर केटीसँग भएको थाहा पाएपछि घरमै ल्याउन आग्रह समेत गरेकी थिईन् अनिताले । अनिताले खर्च पानी सहयोग गर्नुस् भन्दा श्रीमानले पैसा समेत नदिई केटीलाई दिने गरेको उनले बताएकी छिन् । १५ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धलाई चटक्कै माया मा’रेर अनि बिरामी श्रीमतीलाई छाडेर जाने यस्ता श्रीमानलाई कुन श्रीमतीले माफ गर्छ होला र ? हेर्नुस् यो भिडियो :
बाँके नेपालगञ्जका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौँडाका आनन्दराम पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटासहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ‌ओली, निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्र गुरूङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रेस काउन्सिलका प्रमुख विकल पौडेलविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो।
अनुचित कार्य भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूले कारबाहीको मागसहित उजुरी दिएका हुन्। उक्त उजुरी अख्तियारले दर्ता गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अडिओ डेढ महिना पहिले नै सुनिसकेको दाबी गरिएको उक्त उजुरीमा प्रधानमन्त्रीले सो प्रमाण लुकाएर भष्टाचार उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको पुष्टि हुने दाबीसहित छानविन गर्न माग गरिएको छ।